गहुँको रोटी स्वास्थ्यका लागि घातक छ ? – Pahilo Page
गहुँको रोटी स्वास्थ्यका लागि घातक छ ?
६ फाल्गुन २०७८, शुक्रबार ०७:४६ 187 पटक हेरिएको
काठमाडौं । अहिले धेरैले चामलको विकल्पमा गहुँको रोटी खाने गर्छन् । कतिपय रोगको कारण होस् वा तौल घटाउने चक्करमा, रोटी उपयुक्त हुने बुझाई धेरैको छ ।
तर गहुँको रोटी एवं गहुँको पिठोबाट बनेको परिकार वास्तवमै लाभदायक हुन्छ त ? किनभने गहुँ धेरै मानिसले प्रयोग गर्ने अन्न हो । यसले २० प्रतिशत भन्दा धेरै उर्जा र पोषकतत्वको आपूर्ती गर्छ । सदियौंदेखि खाँदै आएको गहुँको रोटीमा यस्तो घातक कुरा के हुन्छ त ?
सेलिएक रोगबाट पिडित मानिसहरुले गहुँको रोटी खानाले ग्यास्ट्राइटिस, पेट दुख्ने, आन्द्रा सुन्निने, झाडापखाला, वान्ता, माइग्रेन र जोर्नीहरुको दुखाई जस्ता समस्या उत्पन्न हुन्छ । सेलिएक रोगले सिधै सानो आन्द्राको पाचनक्रियालाई प्रभावित गर्छ । चिकित्सकहरुकाअनुसार सेलिएक रोग एक उपचार गर्न नसकिने रोग हो जसबाट बँच्नको लागि गहुँबाट बनेको खानेकुरा खान प्रतिबन्ध गर्नु नै एकमात्र उपाय हो ।
यसै कारण आजकाल बजारमा ग्लुटेन फ्रि आँटा पनि पाइन थालेको छ । जसलाई सेतो चामलको आँटा, आलुको स्टार्च, नुन आदी मिसाएर बनाइन्छ । चिकित्सकहरु सेलिएक रोगबाट गहुँबाट हुने रोगबाट बँच्न कालो चना, मकै, तिल, चामल, कोदो, भट्मास, बदाम, ओखर, पेस्ता आदि बाट बनेका खानेकुराहरु खाने सल्लाह दिन्छन् ।
के हो सेलिएक रोग ?